Tag: mepụta ọdịnaya | Martech Zone
Tag: mepụta ọdịnaya
Ndị folks na Copyblogger abụwo isi iyi nke mmụọ nsọ na ndepụta ndepụta m ọtụtụ afọ. Taa ndi otu a weputara ihe omuma mbu ha banyere uzo 22 iji meputa ihe di nma! Ihe omuma ihe omuma a gosiputara otu esi eweghachite ọdịnaya di ugbua na usoro mgbasa ozi di iche, nwetakwuo mkpu site na ebe nchekwa gi, ma rute ndi mmadu ohuru na ndi ozo. Ihe ngosi a sitere na Wzọ 21 iji mepụta ọdịnaya dị egwu mgbe
Ọ na-snowing ụbọchị ole na ole ebe a na Indianapolis… na ọ bụ oge ahụ! N'afọ gara aga, m debere faịlụ free flash na random snowflakes. Enwere ike ibudata ya ma jiri ya dịka ịchọrọ!